1st September 2019, 11:14 am | १५ भदौ २०७६
काठमाडौं : एटिएमको पिन नम्बर ह्याक गरेर ग्राहकको बैंक खाताबाट करौडौँ रुपैयाँ लुट्ने पाँच जना चिनियाँ नागरिक प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। नेपालमा रहेका एटिएम बुथको रकम लुट्ने योजना चीनबाटै बनाएर उनीहरु नेपाल आएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।
शुक्रवार उनीहरु पर्यटन भिसामा नेपाल प्रवेश गरेका थिए। पाँच जनाको समूहमा आएका उनीहरुले जय नेपाल हलनजिकै रहेको माया मनोर बुटिक होटेल बुक गराएका थिए। होटेलको तीनवटा कोठा बुक गराएर शुक्रवारदेखि त्यहीँ बसेका थिए।
काठमाडौं झरेको २४ घण्टामै उनीहरुले योजना अनुसार रकम झिक्न सुरु गरेका थिए। प्रहरीले अहिलेसम्म १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ह्याकरबाट बरामद गरिसकेको छ। बैंकहरुले भने करिब ५ करोड रकम झिकिएको दाबी गरेका छन्।
'चीनबाटै योजना बनाएर आएको देखिन्छ। बैंकहरुको आवश्यक डाटा नै लिएर आएका रहेछन्। रकम झिकेर तत्कालै चीन फर्कने योजना देखिन्छ,' परिसरका डिएसपी होबिन्द्र बोगटीले भने।
शनिवार बेलुका प्रहरीलाई एटिएमबाट रकम झिकिएको सूचना बैंकले नै दिएका थिए। सूचना पाएपछि प्रहरीले कारवाही थालेको थियो। केही समयको निगरानीपछि दरबारमार्गमा रहेको नबिल बैंकको एटिएमबाट एक चिनियाँ नागरिकले झोलामा पैसा लिएर गएको भेटिएपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
‘एटिएमबाट झोलामा पैसा लगेको देखेपछि शंका लागेर अनुसन्धान अगाडि बढाएका थियौँ। सो क्रममा अन्य पनि फेला पार्‍यौँ,' एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ती व्यक्तिलाई पिछा गर्दै गएपछि होटेल माया मनोरमा पुगेको थियो।
‘एक जनालाई एटिएम बुथ र बाँकीलाई होटेलबाट नियन्त्रणमा लिएका हौं,' महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले भने।
शुक्रवार नेपाल आएका उनीहरुले एटिएम बुथबाट निकालेको पैसा झोला र ब्रिफकेसमा राखेर होटेलको कोठामा पुर्‍याउने गरेको देखिएको छ। उनीहरुले दरबारमार्ग, स्रोहखुट्टे, ठमेल क्षेत्रका एटिएमलाई टार्गेट बनाएका थिए। ‘चाँडै सूचना नपाएको भए करोडौँ रुपैयाँ लुटिसकेका हुन्थे,' एसएसपी सुवेदीले भने।
स्रोतका अनुसार, शनिवार नबिल बैंकका विभिन्न एटिएम बुथहरूबाट ठूलो मात्रामा नगद झिकिएको थियो। ठूलो मात्रामा पैसा झिकिएपछि कर्मचारीहरूले के भएको रहेछ भनेर सिस्टमबाट त्यसलाई ट्रयाक गर्न थाले। उनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा पैसा झिकिएको र केही शंकास्पद गतिविधि भएको थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
उनीहरु रकम लुटेर आइतवार र सोमवार नै चीन फर्किने तयारीमा रहेको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
ह्याकरको निशानामा नेपाली बैंक, सिस्टम ह्याक गरेर एटिएमबाटै निकाले पाँच करोड
चीनमै बन्यो नेपालमा 'बैंक लुट्ने' योजना : काठमाडौं झरेको २४ घण्टामा एक्सन, यसरी परे प्रहरी फन्दामा को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)
Mohan bashayl [ 2019-09-02 01:11:41 ]
ग्राहकको हैन होला । बैंकको होला पैसो निकालेको ?? एक पटक चेक गर्ने कि ??
राजु [ 2019-09-01 18:39:59 ]
प्रहरी ले ठुलो गल्ती गर्यो ,त्यो नीपाली रकम तिनिहरुले कसरी चिन पठाउथे भन्ने अनुसंधान गरेको भए ,नेपाल मा बसेर हुन्डी कारोबार गर्ने ठुलै गिरोह पक्राउ पर्थ्यो ।